बिहानै घ*ट्याे निकै दु:खत घ*टना,४ जनाको मि**र्त्यु, ७ जना ग,म्भिर घा*इते - Onlines Time
बिहानै घ*ट्याे निकै दु:खत घ*टना,४ जनाको मि**र्त्यु, ७ जना ग,म्भिर घा*इते
अलिअलि मतभेद भएपछि पहिलो अध्यक्ष अलि बढी एक्लै गर्न लाग्नुभयो । पछि अप्ठ्यारो भएपछि दुइटै अध्यक्षले नौ जनामा साथीहरू खोज्न लाग्नुभयो । त्यसो गर्दा सुरुमा अलिकति कमजोरी भयो । माधव नेपाल कमरेडले विभिन्न विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि उहाँलाई समेट्ने कोसिस गरिएन । अनि एउटा मनोविज्ञान बन्यो ।
दुई अध्यक्ष मिल्दा नौ जना नखोज्ने, नमिल्दाखेरि कहिले ५/४, कहिले ६/३ गर्ने अवस्था बन्यो । त्यहाँदेखि बिग्रेको हो । भदौ २६ मा आएर सबै कुरा सच्याउने भनिएको थियो । पार्टी चलाउनेले पनि सरकार चलाउनेलाई विश्वासमा लिने, सरकार चलाउनेलाई पार्टी चलाउनेको विश्वास गर्ने गरी सँगसँगै जानुपर्छ भन्यौं । तर सरकार पुनर्गठन, राजदूत नियुक्तिलगायतमा र सरसल्लाहमा ग्याप हुनेबित्तिकै भर्खरै अलिअलि प्लास्टर गरिएको जस्तो एकता उप्किहाल्यो । त्यसपछि उप्काउँदै–उप्काउँदै जाँदा खाल्डोजस्तो देखिएको छ । त्यसलाई हामीले पुर्नुपर्छ, सकारात्मक रूपले नै प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
डकुमेन्टका भाषा हेर्दा त सैद्धान्तिकभन्दा पनि पद र जिम्मेवारीका कारण झगडा भएजस्तो देखिन्छ नि ?
विगतमा पदको झगडाजस्तो देखिएको थियो, बेलाबेला । आलोपालोको कुरा मिलायौं । अध्यक्षहरूको जिम्मेवारीलाई ठोस गरौं, नौ र स्थायी कमिटीका नेताहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थित गरौं भन्दा त्यस्तो देखिन्थ्यो । यसपालिचाहिँ स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि त्यो किन कार्यान्वयन भएन भन्नेबाटै बहस भएको छ । त्यसैले यो विचारमै फरक भएको हो । सोच्ने र काम गर्ने तरिकामा फरक हुँदै गएको भन्ने नै छ । हिजो हामी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मान्थ्यौं ।
तत्कालीन एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्थ्यो । दुइटैलाई थाती राखेर महाधिवेशनमा बहस गर्ने र मार्क्सवाद लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्ने भनेका थियौं । तर यो बीचमै ल अब हामी बहुदलीय जनवादमा फर्किन्छौं भन्नेजस्तो कुरा पनि उठेको छ । त्यसैगरी हामी कार्यशैलीमा र विधि पद्धतिमा जाँदा के साँच्चिकै बेलायती मोडेलमा मात्रै छौं ? वा इन्डियाको जस्तो संसदीय मोडेलमा छौं ? वा हामी दुई पार्टी मिलेर एक भएको संक्रमणकालमा छौं ? विचार, राजनीतिक पद्धति र कार्यशैलीको प्रश्न नै मूल हो । तर बाहिर थुप्रै कुरा आएका छन्, नेतृत्व तह त्यो रूपमा नगए हुन्थ्यो ।
अलि शिष्ट र सौम्य ढंगले प्रस्तुत भए हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि आकांक्षा हो । किनभने भावी पुस्तालाई एजुकेट गर्ने कुरा पनि हो । नेकपा बनेको त दुई–अढाई वर्ष भयो । १४/१५ वर्ष पुरानो गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन बन्नुभन्दा अघिदेखिका प्रसंग आउनुले के हामी सँगै बस्न नचाहेको हो, अहिले यो बहस भनेको देखाउने मात्रै हो र हामीले खासमा अर्को कुनै गन्तव्य बनाइसक्यौं, अर्को कुनै निष्कर्ष निकालिसक्यौं, त्यहाँ हामी जान्छौं र जानका लागि कस्तो वातावरण बन्छ भन्नेजस्तो देखिन्छ । बाहिर एकाध साथीहरूको बहस सुन्दा पनि प्रधानमन्त्रीका केही सल्लाहकारले त मेरो नामै लिएर किताब बाँड्दै हिँड्छ, छाप्दै हिँड्छ, त्यस्तो मान्छेले दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व गर्छ भनेको सुन्छु । हामी सक्छौं नि, सकेर आएकै हो । अर्थमन्त्री चलाएको हो, अहिले ऊर्जामन्त्री चलाइरहेको छु, शान्तिमन्त्री चलाएकै हो ।
त्यत्रो युद्ध, गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि लडेकै हो, त्यसै कसैले टिपेर ल्याएको होइन । साथीभाइले नामै लिएर अपमान गर्ने ढंगले बोलेको सुन्दा लाग्छ, साथीहरू के सँगै बस्न नचाहेको हो ? अब सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हो ? तर इतिहासको आवश्यकताले पार्टी एकता भएको हो । दुवै पार्टीले बहुमत शासन, अल्पमतको प्रतिपक्ष, सामाजिक न्यायिकसम्मका कुरा स्वीकार गरिसकेपछि, नेपालमा
सामन्तवादविरुद्धको जनवादी क्रान्ति पूरा भयो र अब विकास समृद्धि सुशासनको युगमा प्रवेश गरिसक्यौं भनेर एउटै राजनीतिक वैचारिक ग्राउन्डमा पुगेपछि हामी एक ठाउँमा आएका हौं । तर प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारहरूले आधा सिट मात्रै आउँछ, अब हारिन्छ, प्रचण्ड आफैं पनि हार्ने भइसकेपछि यहाँ एकता गरेको हो, प्रधानमन्त्रीको किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सक्सेस हुँदैन, एमालेलाई गुटमुटाउँछु भनेर आएको भनेर एकदम गम्भीर प्रकारको आक्षेप आउँदा के त्यस्तो पनि तर्क गर्न सकिन्छ भन्ने त लागेको छ । तत्कालीन माओवादीको स्थानीय तहमा १६ लाख भोट थियो ।
Prevयसरी हुदैछ स्वेताको बिहे | भव्य बिवाह हुदै स्वेता खड्काको | १० ठाउमा सेक्युरीटि राखेर विवाह गर्दै
Nextअर्घाखाँचीमा यो के भयो,घरमा पुग्दा आमाको रुवा”बासी जन्मियो यस्तो छोरि help video (सहयोगकाे लागि सेयर गराै)